avril 2017 - Page 2 sur 70 -
Minisiteran’ny Rano sy ny Angovo : Nanome baiko amin’ny fanaovana tatitra ny minisitra
Araka ny efa fantatra, natambatra ho minisitera tokana ny minisiteran’ny Rano sy ny Fanadiovana ary ny Fidiovana sy ny minisiteran’ny Angovo sy ny Akoran’afo. Lasa minisiteran’ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’afo no fiantso …Tohiny
Tsy fahazakana onjam-piainana : Olona dimy isan’andro no mamono tena
Misy amin’ireo Malagasy no tsy maka ary tsy te haka sarotra intsony rehefa tojo olana goavana, fa dia misafidy avy hatrany ny hanapitra ny andro iainany. Tsy hanavahana saranga na taona na karazan’olona ny fanaovana …Tohiny
Manan-tantara teo amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena Antsiranana tamin’ny ady lehibe faharoa. Toerana izay nitrangan’ny fifandonana nantsoina hoe « Bataille de Madagascar », ka nidiran’ny anglisy tao raha mbola nanjaka tany ny governemanta Vichy. Ny tantara tsy fanadino. Nandritra …Tohiny
Tsy kely lalana ny ratsy, ary saika ny andavanandrom-piainan’olona rehetra amin’izao fotoana izao dia miaina izany avokoa. Ny resaka fisolokiana no anisan’ny malaza sy hataon’ireo olon-dratsy fitadiavam-bola, raha resaka halatra sy vaky trano no tena ...Tohiny